Gbasara Anyị | Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd.
Xuzhou Sunbright nwere otutu usoro nke ngwa ahia nke mejuputara ngwa anya, igwe, igwe eletriki na komputa, tinyere dopplers agba, B ultrasounds, ndi nlekota otutu, colposcopes, electrocardiogram na na. Site na ngwaahịa na ọrụ dị elu, Shanghai Sunbright nwetara ntụkwasị obi dị ukwuu n'aka ọtụtụ ndị ahịa na ntinye uche na nkwado sitere na ndị isi na ọkwa niile. Ugbu a Sunbright abụrụla onye ama ama na akara na akara ahụ, guzobela ihe karịrị alaka ụlọ ọrụ 50 yana mgbe ọfịs ọrụ na mpaghara karịrị mpaghara 20, obodo na mpaghara kwurula na China, ebupụ ngwaahịa karịa mba 50 na Europe, Asia, Africa, South America na North America wee bụrụ ebe pụrụ iche nke Sunbright maka ọrịre na ọrụ.
Ultrasound, Doppler Agba na nyocha kwekọrọ ekwekọ maka akara ama ama na-abụkarị ngwaahịa flagship nke Sunbright. Na 2019, Sunbright enwetala narị narị nzere na America, Africa, Asia na Europe. Mmepụta kwa afọ ruru nkeji 50000, dabere na nrụpụta ọkọlọtọ CE ISO. Site na usoro mmepụta siri ike, nyocha ziri ezi, ndị otu ọrụ ọrụ dị elu, Sunbright raara onwe ya nye ka ọ na-enye ngwaahịa dị elu yana ọrụ dị elu maka ndị ahịa ụwa.
Blọ ọrụ Sunbright nwere usoro mmepụta 6 nke nyocha onye ọrịa, ECG, Infusion Pump, Syring Pump, Fetal Doppler, Pulse Oximeter na Thermometer. Nwere zuru ezu mmepụta usoro na nlezianya àgwà akara. Na mgbawa ọ bụla, bọọdụ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla, Sunbright nwere njikwa zuru oke site na nchekwa ya na ojiji ya, nke iji hụ na igwe dị mma. Ihe bụ ihe ọzọ, ikpeazụ igwe ga-aka nká na elu okpomọkụ na nkịtị okpomọkụ iche iche ruo ọtụtụ iri awa, nke bụ ihe kasị mma nkwa na elu mma.
2). Anyị onwe anyị factory, nditịm ịchịkwa ọ bụla nzọụkwụ nke mmepụta, mma akara mma na nnyefe oge.
Ngosi & Asambodo
Sunbright nwere nyocha nke onwe na ikike mmepe, sistemụ njikwa ogo zuru oke, ndị ọrụ dị elu. Ugbu a Sunbright nwere ihe karịrị ndị ọkachamara ọkachamara 100, ọtụtụ ndị nyocha sayensị na teknụzụ, karịa ndị ọrụ 300. A na-atụ anya ka ha gbasoro arịrịọ dị mma na usoro ọ bụla nke mmepụta na arụmọrụ. Na mgbakwunye na ọrụ ndị bụ isi, Sunbright nwekwara ike ịnye ọrụ a na-ahazi maka mmadụ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Ahịa mbụ, ọrụ mbụ bụ ụkpụrụ nke ọrụ!